एउटा परेवाको मूल्य १४ करोड ! - Lekhapadhi मुख्य समाचार : Lekhapadhi lekhapadhi: global magazine of news and opinion
लेखक : लेखापढी ११ मंसिर २०७७, बिहीबार १५:४३ मा प्रकाशित
काठमाडौं । एउटा परेवाको मूल्य कतिसम्म पर्ला ? तपाईं कति रुपैयाँ तिरेर किन्नुहुन्छ ? हजार…, १० हजार… वा सोभन्दा कम ? तर बेल्जियमा भएको एउटा परेवा १९ लाख डलर (भारु १४ करोड) रुपैयाँभन्दा बढी तिरेर किनिएको छ ।
‘न्यु किम’ नामको उक्त परेवा दुई वर्षका मात्रै थिए । पहिला यसलाई २३७ डलरमा लिलामीमा राखिएको थियो । तर चीनका एक व्यक्तिले त्यसलाई १९ लाख डलरमा किनेका छन् ।
समाचार एजेन्सी रोयर्टसका अनुसार, त्यो परेवा पालेका कुर्त वाउवर परिवार यो खबर सुनेर छक्क परे । दुई वर्षीय ‘न्यु किम’ ले यसअघिको रेकर्ड तोड्न सफल भएका छन् । यसअघि चार वर्षका पुरुष परेवालाई १४ लाख डलरमा किनेको रेकर्ड थियो ।
यस्ता रेसिङ परेवाहरुले १० वर्षको उमेरसम्म बच्चा उत्पादन गर्न सक्दछन् । यस अर्थमा न्यु किमका मालिकले पनि त्यसलाई प्रजनन्‌का लागि प्रयोग गर्नेछन् ।
लिलामी संस्था पीपाका सीईओ निकोलासले रोयर्टसलाई भने, “यो रेकर्ड मूल्य अविश्वसनिय छ किनकि यो (न्यु किम) एक पोथी परेवा हो । सामान्यत: यो प्रजातिको परेवाको मूल्य महँगो हुन्छ किनभने यसले धेरै बच्चा जन्माउन सक्छ ।” निकोलसका अनुसार बेल्जियममा करिब २० हजार परेवा पालकहरु छन् ।